ကျောက်တုံးကိုထွင်းထုတဲ့အခါဘာတွေအာရုံစိုက်သင့်သလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်တုံးကိုထွင်းထုတဲ့အခါဘာတွေအာရုံစိုက်သင့်သလဲ။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-13 မူလ:ဆိုက်ကို
ထွင်းထုပစ္စည်းများစွာရှိသည်။ကဲ့သို့သစ်သားထွင်းထု, ကျောက်ထွင်းထု, ကျောက်စိမ်းထွင်းထုနှင့်ဒါအပေါ်။ အစပြုသူများအတွက်သစ်သားထွင်းထုခြင်းနှင့်ကျောက်တုံးထွင်းထုမှုသည်စတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူပြီးကုန်ကျစရိတ်မှာလူတိုင်းသင်ယူရန်သင့်တော်သည်။နှင့်သင့်လျော်သောrotary tool ကိုထွင်းထုဒါ့အပြင်အရေးကြီးတယ်။
ထုံးကျောက်သည်ပျော့ပျောင်းသောကျောက်တုံးတစ်မျိုးဖြစ်သည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်Mini Rotary Tools များသတ်မှတ်ထားသည် နှင့်အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိပါတယ်။ ဤကျောက်ကိုအနည်ကျစ်များနှင့်အစောပိုင်းအဏ္ဏဝါသက်ရှိများ၏အလောင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော calcite ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤကျောက်သည်ပြင်ပပန်းပုအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အက်စစ်မိုးကိုမွေးမြူနိုင်သည့်အတွက်အလွန်သင့်လျော်ပြီးကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဘိလပ်မြေရှာဖွေခြင်းအတွက်ကျောက်တုံးများလည်းဖြစ်သည်။
ကျောက်တုံးကိုစိုစွတ်စေရန်သဘာဝကုထုံးသည်ပြိုကွဲရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ထိုအိပ်ရာလိုင်းများကိုစိုစွတ်သောအခါပြသနိုင်သည်။ သဘာဝလမ်းညွှန်မှုအရထုံးကျောက်ကိုကာယရေးရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ ထွင်းထုတဲ့အခါတစ် ဦး အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ကျောက်Rotary လက်ကိရိယာ, သေးငယ်တဲ့အက်ကြောင်းတွေရှိမရှိမရှိစစ်ဆေးပါကျောက်။
Dသင်၏အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများကိုရေးဆွဲပါsအသံ, ကိုင်ထားပါငါအနားမှာပါဝါကိရိယာများခိုင်မြဲစွာ, က၏အစွန်းကနေ 1.5 လက်မအကြောင်းကိုအလေးပေးထားပါsအဆိပ်သင့်ရန်မလိုအပ်သောခေါက်နိုင်အောင် Tool ကိုအနည်းငယ်ခေါက်ပါsခေါက်သောအခါအသံလွှင့်ချိန်နှင့်ကိရိယာကိုအရပျ၌ထားစဉ်တိကျစွာကတိကျမှန်ကန်စွာထိမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပါ။ မလိုအပ်သောအဖြစ်ဖယ်ရှားပစ်ပါsဖြစ်နိုင်သမျှသေံသင့်အားဖြင့်လျှပ်စစ် Rotary Hammer Drill.
Dchisel နှင့်ပုံသဏ္ u ာန်ကို chisel နှင့်အတူသင်၏လက်ချောင်းကို chisel အပြင်ဘက်တွင်သင်၏လက်ချောင်းများကိုရိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်သတိရပါ, ပြီးနောက်တွင် groove အချို့ကိုဖန်တီးပါsအသံ, တစ်လက်မကြားကာလထွင်းကြားဖြင့်Rotary Tool -bits။ စိုင်းလယ်လ်ကိုနက်ရှိုင်းစွာမသုံးရန်သို့မဟုတ်ထောင့်တစ်ခုသို့အလွယ်တကူထိခိုက်စေနိုင်သည့်ထောင့်တစ်ခုမသုံးရန်သတိပြုပါကြယ် stတစ်ခု။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဖြတ်တောက်။ ပန်းပု၏ areas ရိယာအားလုံး၏ချိန်ခွင်လျှာကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သွားထွင်းထုထားသည့် groove များနှင့်ကုန်းများကိုပြုလုပ်ပါ။ညာဘက်ကိုရွေးပါလက်ရင့်စက်ကိရိယာနှင့်မီတာoreover, 45 ဒီဂရီခန့်ထောင့်၌ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထောင့်ကအရမ်းမြင့်တယ်ဆိုရင်,sသေံ။ ထောင့်ကအရမ်းနိမ့်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကမျက်နှာပြင်ကိုကျော်သွားလိမ့်မယ်sသေံချောမွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
သွား chisel ၏ texture ကိုဖယ်ရှားပေးရန်ပြားချပ်ချပ်စေးကိုသုံးပါ။နှင့်ကွေးအစွန်းကိုခွက်ပုံသဏ္ as ာန်အဖြစ်သုံးပါ။ထိုအခါနောက်ဆုံးချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်ဖိုင်တစ်ခုကိုသုံးပါsသေံ။ ပျော့ပျောင်းသောအပေါ်ဖြတ်တောက်မှုရှိလိမ့်မည်sထုံးကျောက်ကဲ့သို့သေံ။ သင် polish နိုင်ပါတယ်sစက္ကူနှင့်အတူသေံသို့မဟုတ်အခြားလက်ရင့်စက်ပြင်.
Rotary Tools များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထွင်းထုခြင်းအတွက်အလွန်အထောက်အကူပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့0န်ခံသည်။Micro Motor Rotary Toolsဒါကြောင့်အလားအလာရှိသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်များရှိသည်။ မသုံးမီသင့်အားလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများများစွာကိုသိအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါမစ်ကြီးRotary Tools။ အချို့သောအပိုဆောင်းလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များတွင်အောက်ပါတို့ပါ0င်သည်။ အသုံးပြုပြီးနောက်Rotary အပေါက်လာကြတယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းအားကိုပိတ်ပြီးဖြုတ်ပြီး rotary tool ၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုပြောင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။ ဗိုင်းလိပ်တံန်းကျင်ပတ်ပတ်လည်၌သင်၏လက်ချောင်းများနှင့်မတော်တဆကန်ကိုမကိုင်ချင်ကြဘူး။
rotary tool ကိုထွင်းထု Mini Rotary Tools များသတ်မှတ်ထားသည် Rotary လက်ကိရိယာ ငါအနားမှာပါဝါကိရိယာများ လျှပ်စစ် Rotary Hammer Drill Rotary Tool -bits လက်ရင့်စက်ကိရိယာ လက်ရင့်စက်ပြင် Micro Motor Rotary Tool Rotary အပေါက်လာကြတယ်